ကျန်းမာသော အာဟာရ အလေ့အထ ၄ ဆင့် | Ensure
ကျန်းမာသော အာဟာရ အလေ့အထ ၄ ဆင့်
ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ပုံမှန်ပြုလုပ်နေကျအရာများသည် အလေ့အထတစ်ခုဖြစ်လာတတ်ပါသည်။ အဆိုပါ အလေ့အထများအား ကျွန်ုပ်တို့ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ပြောင်းလဲရန် ဆန္ဒရှိသော်လည်း ချက်ချင်းမပြောင်းလဲနိုင်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့ အသက်ပြန်ငယ်မသွားနိုင်သော်လည်း ကောင်းကောင်းမွန်မွန် အသက်အရွယ်ရလာစေသည့် သော့ချက်က ကျန်းမာခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ပါအချက်များသည် သင်အသက် ၄၀ နှင့် အထက်တွင် ပြုလုပ်သင့်သော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အလေ့အထများအတွက် အကြံပေးချက်အချို့ ဖြစ်သည်။
၁။ သင်ဘာစားသုံးနေလဲ သိပါသလား?
သင့်အရသာခံအာရုံက အချိုအစိမ့်များကို နှစ်ချိုက်နေသလား? အဆိုပါအရာများသည် သိသိရက်နှင့် မိုက်နေခြင်းမျိုးဖြစ်ပြီး အများစုမှာ အရသာအတွက် ကယ်လိုရီနှင့် အဆီများ ဖြည့်တင်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ထိုအရာများအား တကယ်ကိုပြောင်းလဲရန်စိတ်ဆန္ဒရှိပါက အရသာကောင်းမွန်ပြီးကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းသော စားစရာများရှိသည်ကို သိရလျှင် သင်အံ့ဩလိမ့်မည်။
၂။ အစားအသောက် အစားထိုးမှုများ
မလိုင်အချိုပွဲအစား ပန်းသီးမီးဖုတ် သို့မဟုတ် ငှက်ပျောသီး စမ်းစားကြည့်ပါ။ ကြက်ကြော်အစား ကဏန်းပေါင်း စားကြည့်ပါ။ ထမင်းကြော်ဆိုလျှင်လည်း ထမင်းဖြူအစား ဆန်လုံးညိုနှင့် ကြော်စားကြည့်ပါ။ ကစီဓာတ်လိုလျှင် အဆီနှင့်ကြော်သော အာလူးထက် လေနှင့်ကြော်သော အာလူးကြော်စားသုံးပါ။
၃။ ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းက သော့ချက်ပါ
အလေ့အထအသစ်သည် အသားကျစေရန် ခက်ခဲပြီး အချိန်ယူလိမ့်မည်။ သင့်အတွက် အသားကျသည့် ဒုတိယအရာ မတွေ့ခင်အထိ ရွေးချယ်စရာတွေ များပြားလိမ့်မည်။ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာ အသီးတစ်မျိုးတည်းအား များစွာ ဝယ်ယူခြင်းထက် အသီးမျိုးစုံဝယ်ယူပြီး ဖြည့်စွက်စာပါထည့်သွင်းစားသုံးပါ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဖြည့်စွက်စာ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုမှာ ဗီတာမင် ကယ်လ်ဆီယမ်၊ အိုမီဂါ3နှင့် သက်ကြီးပိုင်းများ ကြွက်သားထိန်းသိမ်းရေးအတွက် HMB(Hydroxymethylbutyrate) ကြွယ်ဝစွာပါဝင်သည့် Ensure သို့မဟုတ် Ensure Gold ဖြစ်သည်။
၄။ စိတ်ရှည်သည်းခံ လမ်းကြောင်းမှန်
အဆုံးအမများနှင့် အဆိုအမိန့်များအရ စိတ်ရှည်သည်းခံခြင်းသည် အမြင့်မားဆုံး ခြိုးခြံခြင်းဆိုသည့်အတိုင်း သင့်အတွက် ကျန်းမာရေးအလေ့အထကောင်းမား မွေးမြူရရှိရန် ရက်သတ္တပတ်အချို့နှင့် လအချို့ကြာမြင့်လိမ့်မည်။ အာဟာရ မရှိသည့် သရေစာများအား လျှော့စားသုံးခြင်း၊ ကိတ်မုန့်အစား အသီးစားခြင်း၊ စောစောထခြင်း၊ ကောင်းမွန်းသောအချိန်၌အိပ်စက်ခြင်း၊ နာရီဝက် လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အပြင်ထွက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့မှ တဖြည်းဖြည်းချင်း စတင်ပါ။ အခြားသောအနံ့အရသာများရှိသည့် Ensure များကိုလည်းရွေးချယ်သောက်သုံးနိုင်ပြီး Ensure ရှိတ်(Shake) များပြုလုပ်ရာတွင် ရေအစား နွားနို့အစားထိုး၍လည်း ဖျော်စပ်သောက်သုံးနိုင်ပါသည်။